प्रहरीको निगरानीमा विप्लव ! | Emedia Hub UK
Home News प्रहरीको निगरानीमा विप्लव !
प्रहरीको निगरानीमा विप्लव !
Posted By: Prakash Raion: May 06, 2017 In: News, नेपाल समाचारNo Comments
काठमाडौं । चनाव नजिकिदै गर्दा चुनावी विरोधी गतिविधिहरु पनि बढ्न थालेको छ ।
स्थानीय तह अन्र्तगतको पहिलो निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शनिवार विहान चितवनमा पेट्रोल बम भेटियो भने धादिङ र नुवाकोटमा पनि उम्मेद्वारहरुको गाडीमा तोडफोड भएको समाचारले स्थान पायो ।
यसैबीच सुरक्षा सतर्कता बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालका अनुसार चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावित पक्षलाई पनि नजिकबाट वाच गरिरहे बताईएको छ । उनका अनुसार ‘सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ, चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने जोसुकै भएपनि सजायको भागिदार हुने उनले बताए ।
पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने तीन प्रदेशहरु ३, ४ र ६ को निर्वाचन सुरक्षाका लागी नेपाली प्रहरीले ६१ हजार १४६ प्रहरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीकै कमाण्डमा रहने गरी ७५ हजार म्यादी प्रहरी खटिएका छन् ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीतर्फबाट २२ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको जनाईएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ६० हजार नेपाली सेना, २२ हजार सशस्त्र प्रहरी, ६१ हजार नेपाल प्रहरी र ७५ हजार म्यादी प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको समन्वयमा परिचालन गरिएको छ ।
चुनाव विथोल्न खोज्ने जुनसुकै हैयिसतको ब्यक्ति वा समुह भएपनि पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।
पछिल्लो सयम चितवन र नुवाकोट लगायतका स्थानमा तोडफोमा संलग्न मध्ये केहीलाई नियन्त्रणमा लिईसकेका बताईएको हो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाएर प्रहरी र सेना परिचालन गरिएको हो ।
निर्वाचन विरोधी कुनै गतिविधि भएमा शुरक्षा निकायले पहिले शंका विप्लवको नेकपा भएको बुझिएको छ ।
गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको श्रोतका अनुसार जिल्लाहरुमा विप्लवका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन सर्कुलर नै गरिएको जनाईएको हो ।
श्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुनाव हुने प्रदेशहरुमा विप्लवका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक अपराधको मुद्धा चलाउनसमेत सर्कुलर गरेको बताईएको हो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुर्व क्षेत्रको जनशक्तिलाई मध्य क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ भने सुदुर पश्चिममा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई मध्य पश्चिम क्षेत्रमा परिचालन गरेको बताईएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यलयका अनुसार पश्चिम क्षेत्र र मध्य क्षेत्रमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालमा रहेका कुल प्रहरी कर्मचारी मध्ये १० प्रतिशत मात्रै राखेर अन्यलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइएको छ ।
तपाई कसलाई भोट हाल्नु हुन्छ भनेर नसोध्नु होला ?